1oz Frosted Clear Glass Dropper Bottle 5ml 10ml 15ml 20ml 30ml 50ml 100ml Dropper ပါသော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပုလင်း
★အရည်အသွေးမြင့်မားသော:ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပုလင်းကို ထူထဲပြီး ခိုင်ခံ့စေသော နှင်းခဲများ သို့မဟုတ် ကြည်လင်သောဖန်ခွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အလွတ်ဖြစ်နေချိန်တွင် ဆေးကြောပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အရောင်ဖျော့ခြင်း သို့မဟုတ် ကြည်လင်နေခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ်ရှိသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အမြင့်ဆုံးကာကွယ်ပေးပါသည်။
★အဆင်ပြေမှု-ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပုလင်းသည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး ခရီးသွားရန် သင့်တော်သည်၊ သင့်ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်သွားရာတွင် အဆင်ပြေစွာ လိုက်ဖက်ပါသည်။အတွင်းခံအိတ်များကို ဖန်တီးပါ။
တင်းကျပ်သောတံဆိပ်၊ ယိုစိမ့်မှုအတွက် စိတ်မပူပါနှင့်။
★အများအပြားအသုံးပြုမှု-အမွှေးနံ့သာကုထုံး၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များရောစပ်ခြင်း၊ ခရီးသွားအရွယ်အစားလိမ်းဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများ၊ မိတ်ကပ်၊ DIY လက်ဆောင်များနှင့် နမူနာများအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
★ပြန်သုံးနိုင်သည်-ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အစားထိုးလိုပါက သို့မဟုတ် အခြားသော အလှကုန်နှင့် ခရင်မ်များကို အိုးထဲသို့ ထည့်လိုပါက အတွင်းနှင့် အပြင်ကို အလွယ်တကူ သန့်စင်နိုင်ပါသည်။
★အရေးကြီးသတိပေးချက်-သင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် အခမဲ့ခံစားရပါ။
5ml 10ml 20ml 50ml Amber Glass Dropper Bottle ဗလာနမူနာ CBD Hemp Essential Oil Glass Bottle
★ အရည်အသွေးမြင့်- ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပုလင်းများသည် ထူထဲပြီး ခိုင်ခံ့သော Amber ဖန်ခွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အလွတ်သည့်အခါ ဆေးကြောပြီး ပြန်သုံးနိုင်သည်။Amber အရောင်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ်ရှိသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အမြင့်ဆုံးကာကွယ်ပေးပါသည်။
★ အဆင်ပြေမှု- ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ dropper ပုလင်းများသည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး ခရီးသွားရန် သင့်တော်သည်၊ သင့်ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်သွားရာတွင် အဆင်ပြေစွာ လိုက်ဖက်ပါသည်။ အတွင်းခံအိတ်များကို ဖန်တီးပါ။တင်းကျပ်သောတံဆိပ်၊ ယိုစိမ့်မှုအတွက် စိတ်မပူပါနှင့်။
★ များစွာသောအသုံးပြုမှုများ- ရနံ့ကုထုံး၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ရောစပ်ထားသော၊ ခရီးသွားအရွယ်အစားလိမ်းဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများ၊ မိတ်ကပ်၊ DIY လက်ဆောင်များနှင့် နမူနာများအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
★ ပြန်သုံးနိုင်သော- ပစ္စည်းများကို အစားထိုးလိုပါက သို့မဟုတ် အခြားသော အလှကုန်နှင့် ခရင်မ်များကို အိုးထဲသို့ ထည့်လိုပါက အတွင်းနှင့် အပြင်ကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းနိုင်ပါသည်။
★ အရေးကြီးသောသတိပေးချက်- သင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ အခမဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
10ml / 30ml Cosmetic Dropper Bottle အစိမ်းရောင် Glass Essential Oil Bottle Dropper 30 ml Glass Dropper Bottle
မျက်နှာပြင် ကိုင်တွယ်ခြင်း- မျက်နှာပြင် ပုံနှိပ်ခြင်း
အသုံးပြု: Essential ဆီ
မူလနေရာ: Jiangsu, တရုတ်
မော်ဒယ်နံပါတ်: Essential ဆီပုလင်း
အမည်: 10ml / 30ml အလှကုန် Dropper Bottle အစိမ်းရောင် Glass Essential Oil Bottle Dropper 30 ml Glass Dropper Bottle
အရောင်- အစိမ်း/အကြည်/ ပယင်း/အပြာ/ သို့မဟုတ် သင်စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
OEM / ODM: လက်ခံနိုင်သည်
50ml မှ 1000ml spray dropper ဆေးဝါးဖန်ပုလင်းများ
စက်မှုအသုံးပြုမှု- ဆေးဖက်ဝင် ဖန်ပုလင်း
စွမ်းရည်- 50-1000၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပါ။
အရောင်- အစိမ်းနုရောင်၊ ရှေးခေတ်အစိမ်းရောင်၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော သို့မဟုတ် အခြားရေမှုန်ရေမွှားအရောင်
သော့ချက်စာလုံးများ- dropper ပုလင်း
5ML- 100ML ပယင်းရောင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ ဖန်ပုလင်း
1. ခွင့်ပြုထားသော၊ ဘေးကင်းပြီး ပရီမီယံပစ္စည်း
2. အဆင်ပြေ၊ ဖြည့်ရန် / သန့်ရှင်းရေး
3.Eco-ဖော်ရွေသော၊ တာရှည်ခံ၊ ယိုစိမ့်မှု
4. စနစ်တကျ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
5ml 10ml 15ml 20ml 30ml အပြာရောင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖန်ပုလင်း
BPA ကင်းစင်ပြီး၊ ခဲ-မပါ၊ ဘေးကင်းပြီး ကျန်းမာသော။
Leak-proof ဒီဇိုင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဆီစွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
ခရီးဆောင် 10ml အရွယ်အစား။
အနက်ရောင် ကိုဘော့ရောင်သည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အရည်အသွေးမြင့် 5ML-100ML အကြည်စိမ်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖန်ပုလင်း
စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် 5ML-100ML အပြာရောင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖန်ပုလင်း
အရောင်- အကြည်၊ ပယင်း၊ အပြာ၊ စသည်ဖြင့်။
ပုံနှိပ်ထားသော လိုဂို- ဟုတ်ကဲ့
အရောင်- အကြည်၊ ပယင်း၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ စသည်ဖြင့်။
နမူနာ- ကုန်စည် ကောက်ခံခြင်း။
ဖျော်ရည်အတွက် ဖန်အိုး, ဖန်ရည်ပုလင်းများ, ဖန်ပုလင်းအချိုရည်, Glass Bbq Sauce ပုလင်းများ, Reed diffuser ပုလင်း, ဘီယာ ဖန်ပုလင်း,